Ny fanavaozana angoley dia natao hampisondrotana ny indostrian'ny fizahantany sy ny fandraisam-bahiny
Home » Lahatsoratra mampiavaka » Ny fanavaozana angoley dia natao hampisondrotana ny indostrian'ny fizahantany sy ny fandraisam-bahiny
Septambra 11, 2018
“Ny vidin-tsolika avo kokoa sy ny politika matanjaka kokoa eo ambany fitantanan'ny filoha Joao Lourenco dia tokony hitondra fitoniana bebe kokoa ho an'ny mpanondrana varotra faharoa lehibe indrindra ao Afrika, manamafy ny andrim-panjakana ary manintona ny fampiasam-bola avy any ivelany izay hampiorina ny fitomboan'ny harinkarena ary handray anjara amin'ny fanatsarana ny toekarena, ao anatin'izany ireo sehatra toa ny fizahan-tany sy mandray vahiny. "
Ny firoboroboan'ny vinan'i Angola dia hiakatra satria ny firenena dia manohy mandroso mankany amin'ny làlana ara-toekarena tsara kokoa, "hoy i Wayne Troughton avy amin'ny orinasan-pitsaboana manokana momba ny fandraisana vahiny sy trano, HTI Consulting.
"Niato tampoka ny fitomboana ara-toekarena nahafinaritr'i Angola taorian'ny nifaranan'ny ady an-trano am-polony taona maro tamin'ny 2002 rehefa nianjera ny vidin'ny solika tamin'ny 2014," hoy i Troughton. "Ny faharefoana manaraka ny toekarem-pirenena noho ny fiankinan-doha amin'ny solika dia hita miharihary tato ho ato, miaraka amin'ny fihenan'ny vidin-tsolika noho ny fitomboan'ny harin-karena faobe amin'ny 2016 -0.7%," hoy ny fanazavany.
“Tamin'ny 2016, ny trano fandraisam-bahinin'ny trano fandraisam-bahiny tao Angola dia nidina ho 25% fotsiny, na dia ambony noho ny 60% aza ny tahan'ny ao Luanda renivohitra. Ny tontolo ara-toekarena nalemy, niaraka tamin'ny fihenan'ny sehatry ny solika (mpamily voalohany ny hotely amin'ny hotely alina), dia nisy fiantraikany ratsy teo amin'ny tsena, indrindra fa tany Luanda. Tetikasa fandraisam-bahiny vaovao marobe, antenaina hiditra amin'ny tsena amin'ny taona 2015, no najanona satria nisafidy ny hiandry ny toe-tsena sarotra ny mpandraharaha, ”hoy izy.
“Vao tsy ela akory izay, ny programa fanamafisana Macroeconomic an'ny governemanta vaovao, miaraka amin'ny fiakaran'ny vidin'ny solika ankehitriny, mihoatra ny USD 70 ny barila, dia nitondra angovo vaovao ho an'i Angola,” hoy izy. Ny valim-pikarohana vao haingana nataon'ny The International Monetary Fund dia nidera ny ezaka nataon'ny governemanta hanatsarana ny toetr'andro fampiasam-bola ary ny vinavinan'ny fitomboana nohavaozina ho an'ny taona 2018 dia nafindra hatramin'ny 1.6 ka hatramin'ny 2.2 isan-jato. Fanamarihana Troughton, "Na dia antonony aza ny vinavinan'asa, dia fambara iray kosa fa miverina amin'ny laoniny ny toe-karena ary apetraka ireo singa handrisihana ny fitomboan'ny harinkarena."
"Amin'ny farany, ny tontolo toekarena tafaverina amin'ny laoniny dia hisy fiatraikany tsara amin'ny tsena fizahan-tany sy fandraisana olona eto amin'ny firenena," hoy hatrany izy. "Andian-dahatsoratra maro no manafaingana ny famoahana ny visa-mpizahatany sy visa, dingana iray sarotra amin'ny tantara izay efa ela be fitarainana nataon'ny orinasa iraisam-pirenena ary tokony hanampy amin'ny fanamorana ny fivezivezin'ny orinasa." Ho fanampin'izany, ny fanamboarana ny seranam-piaramanidina iraisampirenena New Luanda, nokasaina hanokatra ny 2015/2016 tany am-boalohany, dia nanomboka indray taorian'ny fahatarana maromaro, ary ny seranam-piaramanidina vaovao, novinavinaina hisokatra amin'ny taona 2020, dia vinavinaina hampiakatra ny fahaizan'i Luanda amin'ny ankapobeny 3.6 tapitrisa mpandeha 15 tapitrisa isan-taona.
Ny tetikasa Sonangol Hotel (trano fandraisam-bahiny 377 misy ahitra 24 ao Luanda) dia tafaverina an-tsakany sy an-davany taorian'ny fanakatonana roa taona. Araka ny fampahalalana nataon'ny orinasan-tsolika Sonangol, "izy io dia ho iray amin'ireo trano fandraisam-bahiny lehibe indrindra eto amin'ny firenena" ary "ho afaka hahita asa vita amin'ity taona ity." Ny Park Inn avy amin'i Radisson Lagos Apapais dia vonona ihany koa hisokatra amin'ny faran'ity taona ity ary, araka ny filazan'ny gazety Angoley Valor Econômico any an-toerana, dia hiverina an-tanindrazana ny AccorHotels. Alka Winter, filoha lefitry ny Global Communications AccorHotels Afovoany Atsinanana sy Afrika, dia tsy afaka nandinika ireo antsipirihany fa nilaza kosa izy hoe: “Mino ny mety ho vina lavitra any amin'ireo firenena iasanay izahay, ary ao anatin'ny tontolon'i Angola , manantena ny hampivelatra ny asanay any izahay amin'ny ho avy ary hanome ny fahaizanay amin'ny fitantanana amina marika marobe. ”
Tamin'ny volana Aogositra tamin'ity taona ity, nanambara famatsiam-bola mitentina 20 tapitrisa dolara ny governemanta Angoley hananganana ivon-toeram-pampiofanana ho tia mandray vahiny ao an-toerana, Luanda Hotel School, ho fanentanana ny indostrian'ny fizahantany ao amin'ny firenena. "Ny tetik'asa $ 20 tapitrisa, izay sady trano fandraisam-bahiny miasa ary sekoly fandraisam-bahiny, dia antenaina hisokatra ao anatin'ny 12 volana ary hanana fahafaha-miasa ho an'ny mpianatra 500 hanana efitrano 50, efitrano fianarana 12 ary fonenana ho an'ny mpianatra 96," hoy ny minisitry ny Angola. ho an'ny trano fandraisam-bahiny sy fizahan-tany, Pedro Mutindi. Ny drafitra fandidiana vaovao ho an'ny fizahan-tany 2018/2022 dia tokony hanampy amin'ny fampivoarana ny fizahantany amin'ny toekarena ihany koa. Raha ny fanazavan'ny minisitra dia ilaina ny manatsara ny serivisy fototra, toy ny fidirana amin'ny lalana sy ny fizahana ny toerana fizahan-tany, mba hiarovana ny toerana misy azy ireo, ary koa ny fampiofanana ireo mpiasa mba hahafahan'ny Angola hahatratra ny fenitra manerantany amin'ny sehatry ny fizahantany.
Angola dia mifantoka amin'ny fampihenana ny fiankinan-doha amin'ny solika amin'ny alàlan'ny fanasamihafa ny toekareny. Ny menaka izao dia mitentina eo amin'ny 96% amin'ny fanondranana, na izany aza ny vinavinan'ny BMI fa hihena 4.3% isan-taona ny famokarana solika eo anelanelan'ny taona 2020 hatramin'ny 2027 dia mampitombo ny fitakiana maika ny fanamorana. Ny lalàna iray momba ny fampiasam-bola tsy miankina, nankatoavin'ny Antenimierampirenena vao tsy ela, dia manala ireo sakana tsy hidirana amin'ny fampiasam-bola mivantana avy any ivelany. Nanangana fandaharana ihany koa ny governemanta amin'ny fanasamihafa ny fanondranana sy ny fanoloana ny fanafarana entana. Manana loharanon-karena harena ankibon'ny tany sy harena an-tany ny firenena. Izy io no mpamokatra diamondra fahatelo lehibe indrindra atsy Afrika ary manana volamena, kobalta, manganese ary varahina, ary koa tahirin-tsolika voajanahary izay mbola tsy novolavolaina tanteraka.
"Vinavinaina hitohy ny fitomboan'ny tinakon'ny hotely any Angola satria ireo faritra ifantohana vaovao dia mety hampitombo ny fivezivezan'ny mpandeha mankany amin'ny firenena." hoy i Troughton. “Rehefa mitohy ny fanavaozana, hitombo ny fahasarotan'i Angola amin'ny maha-toeram-panjarian-tsakafo azy. Ireo mpamatsy vola manana fomba fijery antonony sy maharitra ary manana traikefa teo aloha niasa tany Afrika no azo inoana fa tena mety amin'ny fidirana aloha amin'ity tsena ity.
"Ny fanavaozana mitohy, miaraka amin'ny fanoloran-tenan'ny filoham-pirenena hampiroborobo ny asa ara-barotra mihamitombo, dia manome antoka fa ireo mpampiasa vola ho avy dia handinika izao fotoana izao. Ireo orinasa iraisam-pirenena vonona ny hijery fomba maharitra dia afaka manararaotra ny varavaran'ny varavarana misokatra ary mahazo mialoha ny mpifaninana, "hoy izy namarana.
Fizahan-tany italianina: nahita fikorianan'ny fizahan-tany vaovao i Basilicata
WTTC dia miantso hetsika mba hitazomana ny fifaninanana eo amin'ny Travel & Tour any Eropa